Bezzia dia tranonkala iray izay ao anatin'ny vondrona Internet lehibe AB. Natokana ho an'ny vehivavy ankehitriny ny pejinay, vehivavy mahaleo tena sy miasa mafy manana ahiahy. Ny tanjon'ny Bezzia dia ny hanomezana ho an'ny mpamaky ny vaovao farany amin'ny lamaody, hatsaran-tarehy, fahasalamana ary fiterahana, ankoatry ny hafa.
Ny tonian-dahatsoratry ny ekipanay dia miavaka amin'ny sehatra toy ny psikolojia, pedagogy, lamaody ary hatsaran-tarehy na fahasalamana. Na eo aza ny sampana matihanina samihafa, samy manana tanjona iraisana izy ireo, ny filan'ny fifandraisana. Misaotra ny ekipa fanontana Bezzia, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahatratra ny mpamaky bebe kokoa ny tranonkalantsika. Ny fanoloran-tenanay dia ny hanohy hitombo sy hanome ny atiny tsara indrindra.
El Ekipa fanontana Bezzia Ireto dia misy an'ireto tonian-dahatsoratra manaraka ireto:
Raha te ho anisan'ny ekipa manoratra Bezzia na tranokalanay hafa mikendry vehivavy mpihaino koa ianao fenoy ity takelaka ity.
Mpanoratra, mpandika teny, bilaogera ary reny. Teraka tany Barcelona aho telopolo taona lasa izay, lava loatra ka lasa nandevozin'ny zavakanto, lamaody, mozika ary literatiora. Liana amin'ny fahalianana ary somary tsy mitandrina, mailo hatrany mba tsy hanadino na inona na inona atolotray ny fiainana!
Hatramin'ny naha kely ahy dia nazava aho fa ny mpampianatra dia tokony ho zavatra. Noho izany, manana mari-pahaizana momba ny filôzôfia anglisy aho. Zavatra iray izay azo ampifandraisina tsara amin'ny fitiavako lamaody, hatsaran-tarehy na raharaha ankehitriny. Raha manampy mozika rock kely amin'izany rehetra izany isika dia efa manana ny menio feno.
Telopolo taona ary miaraka amin'ny fandalinana sasany natokana ho an'ny tontolon'ny injeniera, misy filana maro izay mibodo ny fotoako. Nanararaotra nianatra ny iray tamin'izy ireo aho, mozika; Raha ny faharoa kosa, mahandro sakafo, dia nampiana-tena aho. Hatramin'ny naha-asshole an'ny reniko ahy dia tadidiko fa nankafiziko ity fialamboly ity azoko zaraina aminareo ankehitriny noho ny Actualidad Blog. Avy any Bilbao no anaovako azy; Nipetraka teto foana aho, na dia manandrana mitsidika ny toerana rehetra azo atao aza aho mba hitondra kitapo eo an-tsoroko.
Reny, mpampianatra fanabeazana manokana, psychopedagogue ary mientam-po amin'ny fanoratana sy ny fifandraisana. Mpankafy haingo sy tsiro mahafinaritra foana aho amin'ny fianarana mitohy ... manao ny fitiavako sy ny fialamboliko, ny asako. Azonao atao ny mitsidika ny tranokala manokana hahalala ny zava-drehetra.
Mikaroka ny kinova farany tsara amin'ny tenako aho dia nahita fa ny lakilen'ny fiainana madio dia ny fandanjana. Indrindra rehefa lasa reny aho ary tsy maintsy namerina ny tenako tamin'ny fomba fiainako. Ny faharetana ho foto-kevitry ny fiainana, ny fampifanarahana ary ny fianarana no manampy ahy isan'andro hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny hoditrao. Liana amin'ny zavatra vita tanana, lamaody ary hatsaran-tarehy miaraka amiko aho isan'andro. Ny fanoratana no tiako ary mandritra ny taona maro, ny asako. Miaraha amiko ary hanampy anao hahita ny fandanjalanjanao manokana aho hankafizanao fiainana feno sy salama.
Nahazo diplaoma tamin'ny Advertising, ny tena tiako indrindra dia ny manoratra. Ho fanampin'izany, mahaliana ahy ny zavatra rehetra izay mahafinaritra sy tsara tarehy, izany no mahatonga ahy mpankafy haingo, lamaody ary hatsaran-tarehy. Manome torohevitra sy hevitra aho hahatonga azy ireo hahasoa ny olon-kafa.
Mpianatra psikolojia, mpanara-maso fanabeazana ary miaraka amin'ny fialamboly marobe. Ny iray amin'ny filako dia ny manoratra ary ny iray hafa dia mijery horonan-tsary ary mamaky izay rehetra mifandraika amin'ny hatsarana, makiazy, fironana, tarehy, sns ... Noho izany ity toerana ity dia tonga lafatra satria afaka mamoaka izay tiako sy mampifangaro ireo fialamboly roa tonta aho. Manantena aho fa afaka mizara aminareo izay fantatro momba an'io lohahevitra io ary ianareo koa dia hanampy ahy hanohy hianatra momba an'ity lohahevitra ity amin'ny hevitrao. Misaotra tamin'ny famakiana Bezzia.
Manam-pahaizana amin'ny tambajotra sosialy sy Internet ary ny lamaody. Tiako ny manaraka ny vaovao farany sy ny torohevitra momba ny hatsaran-tarehy vehivavy. Raha te ho miramirana ianao dia aza misalasala ary manaraha ahy!
Mpiblaogy, mpamolavola, mpitantana ny fiarahamonina ... tsy milamina ary manana tombontsoa maro izay tonga ao an-tsaiko. Liana amin'ny lamaody, sinema, mozika aho ... sy izay rehetra mifandraika amin'ny raharaha sy ny fironana ankehitriny. Galisiana amin'ny lafiny efatra, mipetraka any Pontevedra aho na dia miezaka mihetsika araka izay tratrako aza. Manohy mandalina sy mianatra isan'andro aho, ary antenaiko fa hitondra valisoa ihany ity dingana vaovao ity.
Psikologista aho ary mpanoratra, tiako ny mampifangaro fahalalana amin'ny zavakanto sy ny fahafaha-misaina maro. Amin'ny maha-olona ahy dia tiako koa ny mahatsapa tsara momba ny tenako, koa eto aho dia hanolotra torohevitra maro ho tsara tarehy ary ho tsara ihany koa.
Teraka tany Malaga aho, toerana nahalehibe ahy sy nianarako, saingy monina ao Valencia aho izao. Mpamorona sary aho amin'ny alàlan'ny asa, na dia ny fitiavako ny mahandro sakafo mahasalama sy mahasalama aza dia nahatonga ahy hanokana ny tenako amin'ny zavatra hafa. Sakafo ratsy tamin'ny fahatanorako, nahatonga ahy liana tamin'ny lakozia salama fahasalamana. Nanomboka teo dia nanomboka nanoratra ny resiko tao amin'ny bilaogiko "The Monster of Recipes" aho, izay velona kokoa noho ny hatramin'izay. Izao dia manana fotoana hanohizako mizara fomba fahandro mahaliana kokoa amin'ny bilaogy hafa noho ny Actualidad Blog.
Salama! Izaho dia Marta, sosiolojia ary mahaliana ny ankizy. Manao horonan-tsary momba ny kilalao izay tena tian'ny ankizy ao an-trano aho. Ankoatry ny fialamboly ho azy ireo dia afaka mahazo fahalalana izay hanampy azy ireo amin'ny fanabeazana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-monina izy ireo, hianatra hifandray amin'ny fianakaviany sy ny tontolony amin'ny fomba mahasalama sy mahasambatra.
Ankizivavy Geek liana amin'ny andian-tantara, boky ary saka. Miankina amin'ny dite. Izaho dia vehivavy poloney espaniola be iray izay tia lamaody koa ary mieritreritra aho fa afaka mitondra fomba fijery vaovao sy am-boalohany momba izany. Ny tsy fahita firy dia mampiavaka antsika ary mila manararaotra azy isika, ny maha-izy antsika tsirairay no lakilen'ny fahombiazantsika sy ny fahasambarantsika.
Carmen Espigares sary placeholder
Psikolojia, manam-pahaizana momba ny HR ary mpitantana ny fiaraha-monina. Granaína amin'ny fiainana rehetra ary mitady tanjona hahatratrarana azy. Ny sasany amin'ireo fialamboliko? Mihirà amin'ny fandroana, filozofia amin'ny namako ary jereo ny toerana vaovao. Ny mpamaky mpamaky trano dia vonona foana hiatrika fanamby vaovao miaraka amin'ny tsikitsiky nambolena. Ny fitsangatsanganana, ny fanoratana ary ny fianarako no tiako indrindra. Amin'ny fiofanana mitohy sy ny mpianatra amin'ny fianarana tsy miankina amin'ny fiainana, satria ... ary inona no antsoin'izy ireo hoe miaina raha toa ka tsy manafosafo izay rehetra atolotray antsika isika ...?
Asa-tanana, asa tanana, fanodinana famoronana, fanomezana tany am-boalohany, haingon-trano, fankalazana ... HANDMADE REHETRA.